विचार - चैत्र २१, २०७५, बिहिबार, रामधुनी
यौन आबस्यकतालाई पछिल्लो समय मानिसको आधारभुत आबस्यकताको रुपमा हेर्न थालिएको छ । जिवनयापनका लागि मानिसलाई अरु जति कुरा आबस्यक छ । त्यति नै आबस्यक छ, यौन पनि । कुरा यति हो की गाँस बाँस, कपास तथा रोजगारी जस्ता आवस्यकताको बारेमा समाजमा ब्यापक चर्चा हुन्छ तर यौनलाई गौण राखिन्छ ।
यौनको बारेमा प¥र्याप्त छलफल नहुँदा पछिल्लो पुष्ताका युवायुवती र किशोरकिशोरीहरु समस्यामा पर्ने गरेका छन् । स्कुल तथा क्याम्पसहरुमा यसबारे बिभिन्न शैद्धान्तिक शिक्षा त दिइन्छ तर यसको ब्यावहारीक पाटो के हो भन्ने ज्ञान दिएको पाइदैन ।
हाम्रो समाजमा यौनलाई दवाएर राख्ने गरेका कारण युवायुवतीहरु लुकिछिपि प्रेम गर्ने र शारिरीक आकर्षणका कारण शारिरीक आकर्षण गर्न पुग्दछन् । यौनको अल्पज्ञान र सामाजिक दमनकै कारण कयौँ युवायुवती शारिरीक र मानसिक तनाब झेल्न बाध्य छन् ।
यौनलाई सामाजिक प्रतिष्ठा, नैतिकता र अस्मिताको खोल ओडाएको कारण लुकिछिपि राखेको यौन सम्बन्धबाट यदि कुनै अविवाहित किशोरी वा युवती गर्भवति बन्न पुगेमा उसलाई समाजले अनेक लाल्लछना लगाउँछ । शारिरीक आकर्षण र यौनको अल्पज्ञानकै कारण शारिरीक सम्बन्धमा पुगेकी ती नारीलाई यो समाजले दिक्दार लाउँछ र कहिलेकाहि त आत्म हत्याको स्थितिमा पनि पु¥याउँने गर्दछ ।
हाम्रो अर्को कुसस्कार भनेको आफ्ना बुबाआमा, दिदीदाजु, शिक्षकशिक्षिका र परिवारका अन्य सदस्य सँग यौनका कुरा गर्दा लाज हुन्छ, भन्ने भ्रम फिजाइएको छ । आखिरमा सबै मानिसमा हुने यौन चाहनालाई किन लुकाउँने त ? आधारभुत आबस्यकता सरहको यो बिषयमा किन लजाउँने त ?आफ्ना अविभावक र अग्रज ब्यक्तित्वहरु सँग यो बिषयमा किन बोल्न नहुने त ?आफ्ना अविभावक सँगको परामर्शले एउटी युवती आत्महत्य गर्नबाट बच्छिन भने किन हामीले मार्ने त ?
आकास छुने सपना बोकेकी ति विचरा युवती यौनको अल्पज्ञानकै कारण, अन्जानमा राखेको यौनको कै कारण झुन्डिन बाध्य छिन भने, उनलाई यो समाजले कहिले सम्म झुम्डाउँछ त ? बास्तममै भन्ने हो भने प्राकृतिक यौन चाहनाका कारण राखेको यौन सम्पर्कलाई अस्मिता र इज्जतको खोल ओडाएर मर्न बाध्य बनाउँने यो समाज ठुलो हत्यारा हो ।
्हाम्रो समाजले एक त यौन शिक्षा दिन सकेको छैन, दिएको शिक्षा पनि त्रासपूर्ण छ । कसैसँग शारीरिक सम्बन्ध राखिस भने तेरो अस्मिता लुटियो, तँ यो समाजमा बस्न अयोग्य मान्छे बनिस भन्ने धम्किपूर्ण शिक्षा दिनु समाजको ठूलो भुल हो । तिब्र यौन चाहनालाई रोकेर अविभावको दबाबको भरमा अपरिपक्क युवायुवती बस्न सक्लान त ? यदि शिक्षा दिने नै हो भने समाजले आफ्नै सस्कृतिलाई जोगाउँने नै हो भने अब यौन सम्पर्कको नकारात्मक पक्षका बारेमा समाजमा जानकारी गराउँनु आबस्यक छ । तर्साएर भन्दा पनि समाजिक कार्य प्रति प्रेरित गरेर युवा पुस्तालाई यौन कार्यबाट मुक्त गर्नु आबस्यक छ ।
यौन चाहनाले मानिस कहिलेकाहि बिक्षिप्त बन्न पुग्छ । मानिस एउटा गतिशिल र बिबेकशिल प्राणि भएको कारण उचित समयमा मात्र यौन सम्पर्क राख्ने कुरालाई सहजै आत्मसात गर्न सक्छ । भबिष्यका कर्णधारको रुपमा रहेका किशोरकिशोरीहरुलाई बलैमा सजग गराउँन्ु नितान्त आबस्यक कुरा हो ।
नियालेर हर्ने हो भने किशारकिशारीहरुले कलिलो र अपरिपक्क उमेरमा गरेको प्रम साचोँ प्रेम नभइ शारीरिक आकर्षका कारण उत्पन्न भएको यौनिक प्रेमको भुङ्ग्रो मात्र हो । यौनको भुङ्ग्रोमा परेका ति अपरिपक्क केटाकेटीहरुलाई इज्जत, अस्मिता र समाजिक लाल्छना लगाउँने भन्दा पनि मानसिक उपचार गरेर होस वा सम्झाइबुभाई जे गरेर भएता पनि सहि र सत्य मार्गमा ल्याउँनको कुनै दोस्रो विकल्प नहोला ।